Komity foiben’ny FFKM : “Mila tetiandro ny famahana olam-pitantanana ny firenena” | NewsMada
Komity foiben’ny FFKM : “Mila tetiandro ny famahana olam-pitantanana ny firenena”
Vita ny komity foibe faha-42 nataon’ny FFKM. Anisan’ny fehinkevitra tamin’izany ny tokony hametrahan’ny fitondram-panjakana tetiandro matotra amin’ny famahana ireo olana ara-pitantanana eto amin’ny firenena.
Manamafy ny antso efa nataony amin’ny fitondram-panjakana ny Fiombonan’ny fiangonana kristianina eto Madagasikara (FFKM) mba hametraka tetiandro matotra amin’ny famahana ireo olana ara-pitantanana eto amin’ny firenena, hiroso amin’ny fiovam-penitra mahery vaika amin’izany.
Izay no anisan’ny fehinkevitry Komity foibe faha-42 nataon’ny FFKM, tany Mananjary, nifarana afakomaly. Tsy eken’ny FFKM ny fanaovana ny vahoaka ho fitaovana hahazoam-pahefana, ny fampiasana ny vola izay mahavery anjavona ny fampianarana kristianina, ny fisian’ny tsimatimanota.
Manana adidy izy hanampy ny rehetra iharan’ny tsindrihazolena, ny fampihorohoroana, ny fitaka sy ny tsy rariny ary ny fahalovana rehetra, nefa tsy afa-manoatra amin’izany. Na tsy nirotsaka ho mpanara-maso mivantana ny fifidianana aza ny FFKM, nandray ny andraikiny tamin’ny fanomanana ny olona hiatrika fifidianana sy hifidy ary hitandro ny fahamarinana hatrany.
Ilaina ny fisokafan’ny fiangonana…
“Ilaina ny fisokafana amin’ny fiangonana kristianina samihafa miaraka amin’ny fepetra sy arofanina apetraky ny birao foibe sy ny filoham-piangonana”, hoy ny fehinkevitra momba ny ekiomenisma. Mandia ny faha-40 taony ny FFKM. Koa entaniny ny fiangonana rehetra ao anatiny mba handray anjara mavitrika amin’izany: hanao fambolen-kazo ho fiarahana amin’izay fankalazana izay isam-paritany.
Hatsangana koa ny radio iraisana ho tsangambaton’ny faha-40 taona. Hajoro ny vaomiera handinika manokana ny momba ny olombelona sy ny tontolo iainana. Harovana ny fitrandrahana ny harena an-kibon’ny tany mba hitondra vokatra ho an’ny vahoaka malagasy tompony. Toherin’ny FFKM ny kolikoly amin’ny endriny rehetra, ary hatsangana ny vovonana iadiana amin’izany.
Eo amin’ny sehatry ny fanabeazana, ilaina ny fanavaozana ny fampianarana toy ny PST. Nefa mbola mila fifampidinihana izay, satria tsy nahafa-po. Hotohizana ny fampianarana momba ny “F” efatra, ary manentana ny rehetra hitondra amim-bavaka hatrany ny firenena.
Hatao eto Antananarivo ny fivorian’ny Komity foibe faha-43 sy ny Zaikabe fahasivy, ny 24-29 novambra 2020. Eny amin’ny katedraly FJKM, Analakely, ny 19 janoary 2020, no hantanterahana ny famindram-pitantana ny birao foiben’ny FFKM, hotarihin’ny filohan’ny FLM mandritra ny taona 2020.